ဟော့ကိုင်းဒိုး | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ဟော့ကိုင်းဒိုး
Updated: 2016-06-28 14:28
ခိုင်းဆဲန်းဒွန်း ( ပင် လယ် စာ တစ်ခါပြင် ပုံစား ) ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
( ဟာကိုးဒတဲ ကို သွား ပြီး ဘာ စားလာ လဲ ) လို့ မေး ရင် ၊ တော်တော်များ များ ရဲ့ အဖြေ ကတော့ ( ခိုင်း ဆဲန်းဒွန် ) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာကိုးဒတဲ ကို လာခဲ့ ရင် လူ တိုင်း စားချင် တာာ ကတော့ လတ်လတ်ဆက်ဆက် ပင် လယ် စာ တ...
Updated: 2016-06-28 14:03
ဟာ့ကိုးဒ တဲ ခိုင်းတဲန်းဆူရှီ ( လည်ပတ်နေသော ဆူရှီ) ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
လက်ရှိ ဂျပန် နိုင် နိုင် ငံ နေရာ အနှံ့ အပြား ကော ၊ နောက်ပြီး နိုင် ငံခြား မှာ ပါ လူ သိများ ကျော်ကြားလာတဲ့ ခိုင်း တဲန်း ဆူရှီ ( လည် ပတ် နေသော ဆူရှီ) ။ကြိုက် တဲ့ ဆူ ရှီ ကို ကြိုက် သလောက် စိတ်လက်ပေါ့ ပါ...
Updated: 2016-06-28 13:44
အဖြူရောင် ချစ် သူ ပါ့ခ် ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
ဟော့ကိုင်းဒိုး မုန့်မျိုးစုံ လုပ်ငန်း ( အဖြူရောင်ချစ်သူ ) ရဲ့ စက် ရုံ လေ့လာရေး အပြင် ၊ အိရှိရ ကိုယ်ပိုင် စတိုင် မုန့်မျိုးစုံ က စားသုံး ကြည့် လို့ ရပါတယ်။ ( ချောကလက် တန်းလျား) ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ လဲ...
Updated: 2016-06-28 13:28
ဟော့ကိုင်းဒိုးဂျင်းဂု ( နတ်ဘုရားကျောင်း) ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
၁၈၆၉ ခုနှစ် ၊ ( ခိုင်းတားပြည်သူပြည်သားတို့ ရဲ့ နှလုံး သား ကို အရင်းတည်) ဆို ပြီး မဲဂျိ ဧကရာဇ် က ဟော့ကိုင်းဒိုး မှာ ( ခိုင်း တိုင်း နတ်မင်း ၃ပါး ) ကို ပူဇော်ပသ သော အနေဖြင့် ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျင်းဂု ကို စ...
သဘာဝရှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊
Updated: 2016-06-28 13:12
အာစာဟိ ရာမ တိရိစ္ဆာန် ဥယဉ် ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
ဂျပန် နိုင်ငံ မြောက်ဖက် အကျဆုံး မှာ ရှိ တဲ့ တိရိစ္ဆာန် ဥယာဉ် ။ တိရိစ္ဆာန် လေး တွေ အတွက် လွတ်လွတ် လပ်လပ် နေနိုင်လောက် တဲ့ အကျယ် အ၀န်း ၊ပုံ မှန် တောတွင်း မှာ ကျင် လည် ကျက် စား နေတဲ့ တိရိစ္ဆာန် လေ...
Updated: 2016-06-27 16:59
အိုးဒိုရိ ပန်း ခြံ ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
စာ့ပိုရော် မြို့ ရဲ့ အချက် အချာ နေရာ တစ် ခု ဖြစ် ပြီး မြို့ အလည် ခေါင်လောက်ကျ သော ၁.၅ ကီ လိုမီတာ လောက် ကိုဖြတ် ပြီး သွယ် တန်း ထားတဲ့ ဂရင်း ဘဲလ်တ်( အစိမ်းရောင်းလမ်း သီးသန့်ရှိသော ) က မြို့ တည်ဆောက် စဥ...
Updated: 2016-06-27 16:36
အာစာဟိ ခါဝ လားမဲန် မူရ ( လားမဲန်ခေါက်ဆွဲ ရွာ)
အာစာဟိခါဝ လားမဲန် ခေါက် ဆွဲ ရွာ ကလေး ဟာ အာဆာ ဟိ ခါဝ ဒေသ ကို ဂုဏ် တက်စေတဲ့ လားမဲန် ခေါက် ဆွဲ ယဉ် ကျေး မှု ကို ပို မို ပြန့်နှံ့ သွား စေရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း မှာ စတင် ခဲ...
Updated: 2016-06-27 16:27
နိဆယ်ကို ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
ကမ္ဘာမှာ တောင် လက်ချိုး ရေ လိုရတဲ့ နှင်း နဲ့ စကိတ် အပန်းဖြေစခန်း တို့ ရှိ တဲ့ နေရာ ဆို ပြီး ( အာရှရဲ့ မော့ရစ်တောင် ) လို့တောင် ခေါ် ဆို ကြ ပါတယ်။ ရာ သီ စပြီး ဆို တာ နဲ့ နိုင် ငံ ခြား က ဧည့်သည်များ ပင...
Updated: 2016-06-27 16:11
မိုအဲရဲနူမ ပန်းခြံ ဟော့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
စာ့ပိုရော် မြို့ အရှေ့မြောက် အရပ် မှာ ရှိ ပြီး တန် ၂၇ သိန်းသော အမှိုက် တွေ ကို မြှုပ် နှံ ပြီး နောက်တည် ဆောက် ထား တဲ့ 1.89k㎡ရှိသော ပန်းခြံ တစ် ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၂ခု နှစ် မှာ စတင်တည် ဆောက် ခဲ့ ပြီး ၂...
Updated: 2016-06-27 15:53
စာပို့ရော် ဘီယာသမိုင်း ပြ တိုက် ဟို့ကိုင်းဒိုး ဂျပန်
စာ့ပိုရော် ဘီယာ ကို စတင် ထုတ် လုပ် ခဲ့ တဲ့ ဟို့ကိုင်းဒိုး စာ့ပိုရော် မြို့ က ဂျပန် နိုင် ငံ မှာ ပထမဦး ဆုံး ဘီယာ ကို ထုတ် လုပ် ခဲ့ တဲ့ ဒေ သ ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ( စာ့ပိုရော် ဘီယာ သမိုင်း ပြ တိုက် ) မှာ ဆို ရ...